नेपालगन्ज-१९ माओवादीको लहर, जनता स्वयं सडकमा मत माग्दै – GoodnewsKhabar
नेपालगन्ज-१९ माओवादीको लहर, जनता स्वयं सडकमा मत माग्दै
गुडन्यूज खबर । २०७९ बैशाख २६, सोमबार १३:४०
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा जनलहर उर्लिन थालेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । आइतबार दिउँसो माओवादीको चुनावी र्‍यालीमा सर्वसाधारण पनि सडकमा मतदानका लागि हात जोड्दै हिडेका छन् ।
माओवादी केन्द्र तर्फका उम्मेदवार सम्भु नाथ योगीले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दिदै जनतासामु हात जोड्नु भएको छ । घरदैलोमा पुगेर योगीले आफ्नो पक्षमा मतदान गरे स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका सबै आवश्यकता पूरा गरिदिने बताउनु भएकोछ । नेकपा माओवादी केन्द्र वडा इन्चार्ज मिना मल्ल पुनको निर्देशनमा सबै वडाबासीलाई भेटेरै मत मागको वडा सचिवालयले बताएको छ ।
वडा-१९ का सबै टोलबासीलाई पटकपटक भेटेरै मत मागेको र जनताले यसपटक माओवादीलाई मतदान गर्ने बताएका छन्, इन्चार्ज मल्ल पुनले बताउनु भयो ।
२०७९ बैशाख २६, सोमबार १३:४०
नेपालगन्ज । “निरक साहुजी” वडावासी माझ चर्चित नाम । आसन्न स्थानिय तहको निवाचनमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १२ को वडाध्यक्षका उम्मेदवार निरक बहादुर शाही आफ्नो वडामा “निरक साहुजी” का रुपमा परिचित छन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकिकृत समाजवादी)को संयुक्त गठबन्धनबाट वडाध्यक्ष पदका साझा उम्मेदवार बनेका शाही आसन्न स्थानिय […]
२०७७ माघ ११, आईतवार १६:३२
नहरमा परेको निल गाईलाई उद्दार
२०७७ भाद्र २१, आईतवार ०७:५०
सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमैका तल्लावाज बार्बाडोससँग ७ विकेटले पराजित